MAXAA KA DAMBEEYA CADAADISKA SIYAASADED AY KENYA DOONEEYSO INAY SAARTO SOOMAALIYA? - Latest News Updates
Cadaadis kastoo siyaasadeed waa inay jiraan ulajeedo ka dambeeyso, hadaba waa maxay sababta?
A- Kenya waxaa ka soo xirmay dacwadii (legal course ) maxkamadda caalamiga oo ay Kenya aragtay inaysan ku guuleeysan doonin la wareegida shidaalka bada Soomaaliya. Waxay isku dayday in dacwada loo wareejiyo xarunta qaramadda midoobay Newyork, taasna laga diiday in dacwada loo gudbiyo Newyork.
Waa maxay sababta ay Kenya u dooneeysay in NewYork loo wareejiyo dacwada?
Kenya waxay ku guuleeysatay inay xubinka sare ka hesho Gudi Sare UN u qaabilsan arimaha xuduudaha bada. Ninkaas oo lagu magacaabo SIMON NJUGUNA. Mr. Njugna waa ninkii qoray “Continental Shelf” oo lahaa fikirka la doonaayo in lagu xadadeeyo Bada Soomaalida, waxaa wax lala yaabo ah inuu hadana ka mid yahay gudi go’aanka ka gaaraaya arimaha xududaha bada. Taasi waa A conflict of interest (COI). Kenya waxay dooneeysaa in dacwadaan la hoos geeyo UN, si wiilkoodi go’aan uga gaaro. Taasna waa laga diiday.
B- Kenya waxaa kaloo mushkilad kaga yimid shirkadihii ay siisay ruqsada ama shatiyada si ay ula soo baxaan oil ama shidaalka, ka dib markeey arkeen shirkadahaasi in dacwada looga guuleeysanaayo Kenya, waxayna ka dalbadeen in lacagtooda dib loogu celiyo, waana sababta hada ay ugu yeereeyso gumeeyste shirkadahaasi Norway, France, Italy iyo America. Waayo lacagtii hore baa laga doonayaa inay soo gudaan.
C- Kenya waxay kaloo sheeganeeysaa bada Tanzania oo ayadana laga helay shidaal, hadii looga guuleeysyo dacwada Bada Soomaaliya waxaa hubaal ah inay ku qasaari doonto tan Tanzania, taasna Aad bay uga baqeeysaa.
Hadaba Kenya maxay ka dooneeysaa Soomaaliya?
Waxay rabtaa inay culeeys siyaasadeed ay saarto dowladda Soomaaliya (diplomatic pressure) si miiska wada hadalka Soomaaliya loo keeno Soomaaliya si dib looga noqdo dacwadaas. Arintaas waxay ku abuuri kartaa shirkadahii ay lagacta ka maqan kalsooni si ay meesha uga baxdo lacagta laga rabo.
Hadaan nahay dadka Soomaaliyeed ee xoogaa fahan u leh arimaahaas, waxaa nagu qasab ah inaan shacabkeena u sheegno arinta dhabteeda si ay uga foojignaadaan lugooyadda siyaasadeed ee dalkooda lala damacsan yahay.